ဆက်သွယ်ရေး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homerayhab - မီးရထားသတင်းနှင့်လေလံပွဲဆက်သွယ်ရေး
ÖZENRAYမီးရထား, Ltd. STI
ဖြေ mah တရားမျှတရေး။ Anatolia CAD ။ Megapole မျှော်စင် 41 / 81 35530 Bayrakli Izmir တူရကီ
T က: + 90 (232) 7000729 | အီး: ငါ info@ozenray.co
T က: + 90 (232) 7000729 | အီး: ငါ iletisim@rayhaber.co
မသန်စွမ်းခရီးသည်များများအတွက်လမ်းညွှန်ကိုဆက်သွယ်ပါကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် 30 / 05 / 2012 မသန်စွမ်းခရီးသည်အဆက်အသွယ် directory ကိုပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမသန်စွမ်းခရီးသည်နှင့်အတူကျန်းမာဆက်သွယ်ရေးတည်ထောင်ရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့ပြင်ဆင်သောလမ်းညွှန်စာစောင်၏ပုဂ္ဂိုလ်များ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (UITP) နှင့်ဥရောပညီလာခံ၏ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများ (ECMT), ပြင်ဆင်ထား "ဟုဆက်သွယ်ပါ Directory ကိုအတူမသန်စွမ်းတစ်ဦးခရီးသည်" 10-16 မေလ Handicapped အပတ်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကမ်းလှမ်းရန်ဒီတော့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုအားအခမဲ့ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်ကြောင်း sensitivity ကိုနှင့်အသိပညာဖျောသငျ့လျြောသောဆက်သွယ်ရေးတည်ထောင်ရန်ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim "အိမ်၏နှစ်သိမ့်စေရန်လိုအပ်နေမသန်စွမ်းလူဦး", "မသန်စွမ်းပုဆက်သွယ်ပါ Directory ကိုအတူခရီးသည်" သူ၏ကြေညာချက်, မသန်စွမ်းလူများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် related, "ရဲ့မေ့လျော့တော်မစို့ ...
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: Dallas ရှိ Transit ဆက်သွယ်ရေးညီလာခံ 2012- 08 / 10 / 20122။ အကူးအပြောင်းဆက်သွယ်ရေးညီလာခံ 23 / 10 / 2012 - အမေရိကကြားမှာ 25 / 10 / 2012 ရှိ Dallas မြို့တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီနေရာကိုနှိပ်ပါပေးပါ: http://www.transit-comms.com/
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တူညီတဲ့အရည်အသွေးပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနေရာချထားခြင်းအချိန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမှတ် (ဗီဒီယို) 05 / 09 / 2013 11: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနေရာချထားခြင်း၏ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတူညီအရည်အသွေးကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အမှတ်၌။ ပို့ဆောင်ရေး, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမြောက်ဘက်-တောင်ဘက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှေ့အနောက်တိုင်းပြည်အဖြစ်အခုတော့ "ကောင်စီ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သင်္ဘောဝန်ကြီး Binali Yildirim မှာ Speaking တိုင်းအမှတ်အတွက်တူညီတဲ့အရည်အသွေး, တူညီတဲ့စံ, တူညီတဲ့အရှိန်အဟုန်, နှစ်သိမ့်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာညီမျှမှုဖျက်သိမ်းရေး၏လကချွေတာခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဒါဟာအမြန်ဆက်သွယ်ရေးပေးဖို့အချိန်ဖြစ်၏။ " သူကပြောပါတယ်။ 11 သည့်အစ္စတန်ဘူလ်ကွန်ဂရက်စင်တာ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးသမ္မတအဗ္ဗဒူလာဂူးလ်, ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဘာရှား Atalay, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ဝန်ကြီးတရားရေး Sadullah Ergin, ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Mehmet Müezzinoğlu, အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Ismet Yilmaz, အကောက်ခွန်မှဆက်သွယ်ရေးနှင့်ရေကြောင်းကောင်စီ ...
Vodafone တူရကီစေလွယ်ကူနှင့်အဆက်အသွယ် Marmaray 31 / 10 / 2013 Vodafone တူရကီ, သူစဉ်ဆက်မပြတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အသစ်တစ်ခုမိုဘိုင်းကွန်ရက်ကဆက်ပြောသည်နှင့် Marmaray အတွက်၎င်း၏စာရင်းသွင်းသူဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စတင်ခဲ့ပြီးဘယ်မှာ: Vodafone တူရကီစေလွယ်ကူနှင့်အဆက်အသွယ် Marmaray ။ Vodafone တူရကီဒါ subscriber များအားရထားလမ်းတမြို့လုံးသည်အသက်သစ်တစ်ခုအသက်ရှူဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဆကျသှယျဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ မြေကြီးတပြင်ရဲ့တိုက်ကြီး Marmaray ချိတ်ဆက်အောက်မှာတူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားတွင် Vodafone ကွန်ယက်ကိုဂျီအက်စ်အမ်န်ဆောင်မှုကိုပေးတော်မူ၏။ အပြိုင်အတွက်၎င်း၏စာရင်းသွင်းသူကွန်ရက်သုံးစွဲဖို့အဆင်သင့် Marmaray, Vodafone တူရကီ၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ subscriber များအားရထားလမ်းဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်အောင်မြို့ကိုအသက်တာ၏သစ်တစ်ခုအသက်ရှူဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ အရှင်တိုင်းပြည်အတွက် 99 ရာခိုင်နှုန်းကိုလွှမ်းခြုံမှုနှုန်းသည်အလွန် Vodafone တူရကီ Marmaray ...
အဆိုပါ Intercultural ဆက်သွယ်ရေးနေ့ BVSoL နိုင်ငံ 21 61 ကစီစဉ်ကြောငျးသားမြား၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည် 22 / 04 / 2014 အဆိုပါ Intercultural ဆက်သွယ်ရေးနေ့ 21 ကစီစဉ် BVSoL တိုင်းပြည်ကနေကျောင်းသားများကို 61 များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်: Beykoz ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးမှုကျောင်း့ Prep Classes ရဲ့, 10-11 ကြောင်းဧပြီလ 2014 နေ့စွဲ "Intercultural ဆက်သွယ်ရေးနေ့" ပေါ်တွင်တူရကီရဲ့တက္ကသိုလ်များအတွက်လေ့လာနေနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ 21 ၏ပထမနေ့၌ 61 တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတိုင်းပြည်ကနေ 21 နိုင်ငံတကာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ... လှုပ်ရှားမှုများ (အီရတ် 2, ကိုလံဘီယာ 4, လတ်ဗီးယား 1, ပိုလန် 1, လိုဗက်ကီးယား 2, ရိုမေးနီးယား 3, လစ်သူ 4, အင်္ဂလန် 1, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 5, ဂျာမနီ4ပါလက်စတိုင်း2ယူကရိန်း 2, 1 တူနီးရှား, တာ့ခ်မင်နစ္စတန် 2, အယ်လ်ဘေးနီးယား 4, 1 လစ်ဗျား, တောင်အာဖရိက 1, 1 နိုင်ဂျီးရီးယား, အာဖရိက 1, 13 အာဖဂန်နစ္စတန်, ဆီးရီးယား 6) 61 ...
ဘူတာရုံက Metro နှင့်ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးမှာ Ankaray 01 / 12 / 2014 Metro နှင့်ဘူတာရုံ Ankaray ဆက်သွယ်ရေး: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကလီ Ihsan ခေတ္တတူရကီမြို့တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ, Metro အတွက်ကွယ်လွန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက် ankaraya အတွက်မပြတ်မတောက်ဆက်သွယ်ရေးသေချာစေရန်အိန္ဒိယဘူတာရုံအိမျစနစ်များတည်ထောင်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ခေတ္တပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကလီ Ihsan သမ္မတအတွက်တူရကီမြို့တော်ကောင်စီမှာကွယ်လွန်, ထိုသို့ ankaraya အတွက်မပြတ်မတောက်ဆက်သွယ်ရေးသေချာစေရန် Metro ဘူတာအင်ဒိုအိမျစနစ်များတည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ Metro နှင့် ankaraya အတွက်ခရီးသွားလာခရီးသည်ဤဒေသများရှိမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ကားဆွဲမိုးလုံလေလုံဘူတာရုံအတွက်ဆက်သွယ်ရေးဘူတာရုံအိမ်သူအိမ်သားဆက်သွယ်ရေးစနစ်, အထူးသဖြင့် Metro နှင့် ANKARAY မိတ်ဖက်ဘူတာချပြီး၏ညှနျကွားအတွက်တောင်းဆိုကြောင်းဖော်ပြထားသည်ပါလီမန်မှသမ္မတရေးသားခြင်းအတွက်အနှစ်ချုပ် ...
Samulaşန်ထမ်းထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း 29 / 03 / 2016 Samulaşန်ထမ်းထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း: Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Samulaş Inc က "ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်တစ်ဦးချင်းအဝန်းဆက်ဆံရေး" နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်တာဝန်များထမ်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်။ နောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲအားဖွငျ့ဖျြောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ဖို့ Samsun အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကြောင်းSamulaş Inc ကို, အစိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လူထုဆက်ဆံရေးအေဂျင်စီများခိုင်မာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ Samulaş Inc က Samsun ပြည်နယ်အမျိုးသားပညာရေး၏ညွှန်ကြားမှုနှင့် Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Samulaş Inc ကိုအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခန်းမ "ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အဝန်းဆက်ဆံရေးပုဂ္ဂိုလ်များ" ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ၏အမွေကိုအတူလိမ့်မည် 84ရက်ပေါင်းလေ့ကျင့်ရေးပညာရေးအတွက်စတင်ခဲ့ပြီးSamulaşအတွက်အလုပ်လုပ်အားလုံးန်ထမ်းများဖုံးအုပ်။ ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်ကောင်းစွာ ...
Mint, ဆက်သွယ်ရန် Virtual magzine ။ မီဒီယာစားနပ်ရိက္ခာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Ltd. , STI ။ အဆိုပါ 2016 InnoTrans ကုန်သွယ်ရေးအတွက် 19 / 09 / 2016 Mint, ဆက်သွယ်ရန် Virtual magzine ။ မီဒီယာစားနပ်ရိက္ခာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Ltd. , STI ။ InnoTrans တရားမျှတသော Mint, 2016 ဆက်သွယ်ပါရဲ့ Virtual magzine ။ စားနပ်ရိက္ခာကိုဖန်ဆင်းသောမီဒီယာ။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Ltd. , ကာလသား။ Halkalı Merkez Mah ။ ဝှမ်း Express ကိုအဝေးပြေး cad.capital ရုံးမျှော်စင်အမှတ် 74 K.çekmece / အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်တူရကီဖုန်းနံပါတ်: + 90 212 471 70 24 ဖက်စ်: + 90 212 471 70 25 မိုဘိုင်း: + 90 545 251 2275 Mint, ဆက်သွယ်ရန် Virtual magzine ။ မီဒီယာစားနပ်ရိက္ခာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Ltd. , STI ။ , ဘာလင်ခန်းမ 2016 6.1 / 210 အတွက် InnoTrans ကုန်သွယ်မှုတရားမျှတမှာလည်းနေရာအရပ်ယူပါ။
TCDD3။ အဆိုပါဆက်သွယ်ရေး၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်အဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ Verildi 10 / 11 / 2017 အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းများအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာ / မြည်းလမ်းပေါ်အလင်းသွန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူန်ထမ်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၏အသိအမြင်များ၏အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့, အပြုသဘောအခြေအနေများအကဲဖြတ်ရန်ရှာဖွေတာကြောင့် TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှုမန်နေဂျာ, "ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု" သင်တန်း, နာမည်ကိုယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် NLP ကျွမ်းကျင်သူစာရေးဆရာ Oguz ဒါဟာပေးခဲ့သည်။ TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Selim Koçbayလက်ထောက်ဝန်ဆောင်မှု Manager ဖြင့်ဆက်လက်3အပေါ်အဆုံးသတ်မည်, ဒေသဆိုင်ရာဒုသမ္မတနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဒါရိုက်တာ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ 07.11.2017 အပေါ်လေ့ကျင့်ရေးစတင်ခဲ့သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဆက်သွယ်ရန် Service ကိုAlınacaktır 19 / 12 / 2017 ဆက်သွယ်ရန်ဝန်ဆောင်မှုန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး၏သမ္မတနိုင်ငံတူရကီ STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး CORPORATION TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို Interactive မှဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ခံရကြလိမ့်မည်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 651257 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ANAFARTALAR MAHALLESİTALATPAŞA Boulevard 12 06050 GAR ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 71579 - 3123091365 ဂ) E-Mail ကလိပ်စာ: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်: များ၏နူးညံ့သောက) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-service ကိုဘာသာရပ် ...
Mesut Ishakoglu ဟုသူကဆိုသည်:
ပိုက်ဆံပြီးသားစနစ်တကျပေးဆောင်ပြီးနောက်ရေကြောင်း xnumxg တာဝန်ရေကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များyaptım.selayödemediler.selayငါ၏အလစာငါ၏နာမကို 2013 နှစ်ပေါင်း (သမုဒ်) မှသင်္ဘောများပေါ်တွင်တာဝန် yapmaktayim.murat hacibekiroğluxnumx (xnumxtl) (2 ရက်) ပျော်ရွှင် Ishakoglu သည်နှင့်ငါနေသာသင်္ဘော (xnumxtl) မှတစ်ဦးလစာမရနိုင်တော့သည့်အခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသည်စောစောသွား၏ ငါခရုဇ်သင်္ဘောများနှင့် Limani ayrıldım.azovLtd.Şti azov သင်္ဘောများတွင်လေဗနုန်တောပိုင်ဆိုင်မရှိခြင်းကြောင့်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ပျက်ကွက်ရာမှတွေ့ကြုံခံစားဖို့စတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်ထိုသို့ပြု၏အစောပိုင်းayrıldım.gatရေကြောင်း (အပြာရောင် marmara) အတွက် 3000 နဲ့ 86 လ (3000-92) တို့အကြားလစာငွေပေးချေ၏ Alarga ၌ရှိ၏ 45 လမစ်ရှင်yaptım.tramolaxnumx RoRo ရေယာဉ်များအတွက်အာရေးဗီးယားနှင့်ဂျော်ဒန်ခရီးစဉ်နှင့် RoRo ထံမှသင်္ဘောကျင်း၏ဒြပ်စင်များပေးပို့ခြင်း beykoz လောင်စာခှတာဝန်yaptım.ulusoyxnumxကွာအလုပ်လုပ်ကြိုတင်မဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ခြေ cenker y ကိုသင်္ဘောများနှင့်အတူများမှာအသုံးပြုဖို့သင်္ဘောကျင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပြီးရေကြောင်းစမ်းရေတွင်း၌ indirdiler.cenk စတင် က de tropes erdeniz ၏ (အစားအစာကနေအညွှန်းမှ) yaptım.mantရေကြောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် Bird ကိုသင်္ဘောများ 2-2014 သင်္ဘော်ထမ်းဆောင်gönderdiler.birdeဒြပ်စင်လက်ခံရရှိတာဝန်သင်္ဘောသင်္ဘောတည်နေရာနဲ့ Bird ကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည်ကာလတွင်ယာယီငှက်ရေယာဉ်အားဖြင့်çalışmayınထံမှသင်္ဘော erdeniz running Birdesu မှaldım.erdeတာဝန်များကိုအကြားမှစတငျရ ငါkaldım.önceရည်ညွှန်းကြောင့်အရာမှငါရေကြောင်းကုမ္ပဏီများကမှာအလုပ်လုပ်နှင့်နောက်တဖန်ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အလုပ်ခွင်ကျော်အနားယူနေစဉ်သူတော်စင်သင်္ဘော xnumxufak မတော်တဆမှုသုံးစွဲပို့ဆောင် Cenky သင်္ဘော၌ခိုငျမွဲçaliştim.soကြောင်းအဆင့်မြင့် sertetifika ALMIS bulunmaktayım.cenkအုပ်စုသည်ရေကြောင်းကုမ္ပဏီများသည်ငါ၏အခေါင်းစဉ်bulunmaktayım.kimyasalယူကြပြီ ustagemic ကိစ္စရပ်များထားခဲ့ပါနှင့်လည်းငါ့အရေနံခဲ့ရတယ် başlıyorum.gereklရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်း ederim.gempo အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကကမ်းလှမ်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေအလုပ်လုပ်တယ်: 2015 နဲ့ကျွန်မ tlf.numara:6နှင့် 2
အဆိုပါ Intercultural ဆက်သွယ်ရေးနေ့ BVSoL နိုင်ငံ 21 61 ကစီစဉ်ကြောငျးသားမြား၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်
Mint, ဆက်သွယ်ရန် Virtual magzine ။ မီဒီယာစားနပ်ရိက္ခာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Ltd. , STI ။ အဆိုပါ 2016 InnoTrans ကုန်သွယ်ရေးအတွက်